» को पुग्छ फाईनलमा ? यस्तो छ सम्भावना
को पुग्छ फाईनलमा ? यस्तो छ सम्भावना
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:१०
मकवानपुर, २२ फागुन । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ अहिले उपाधी भिडन्तको नजिकै छ । उपाधी भिडन्तको नजिक पुगेसँगै फाईनलमा को पुग्छ र कसले जित्छ भनेर दर्शकहरुले समेत अनुमान लाउन थालेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयको अनुमान सहि सावित समेत हुँदै आएका छन् । यस सामग्रीमा उपाधि दाबेदार मानिएका ४ जना प्रतियोगीहरुलाई उनीहरुले पाएको अवार्ड र चर्चाका आधारमा फाईनलमा पुग्न सक्ने दाबेदारका रुपमा चर्चा गरिएको छ । अवार्डका आधारमा सर्वाधिक अवार्ड पाएका सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल, केविन ग्लान तामाङ र मेघा श्रेष्ठको बारेमा क्रमबद्ध रुपमा चर्चा गरिएको छ । यो सामग्री तयार पार्दाको समयसम्म यीनीहरुमध्ये सज्जाले सर्वाधिक ८ वटा अवार्ड, प्रविणले ७ वटा, केविनले ६ वटा र मेघाले पनि ६ वटा नै अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
१) सज्जा चौलागाइ– सज्जा चौलागाई नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् । नेपाल आईडलमा सर्वाधिक अवार्ड जित्ने प्रतियोगीमध्येकी एक सज्जाले गाला राउण्डको छैटौँ हप्तासम्ममा ८ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । सज्जाले गाला राउण्डको पहिलो र दोस्रो हप्तामा गरी २ वटा ‘रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक’ को अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै काठमाडौँ अडिसन र थिएटर राउण्डको बेस क्याम्पबाट ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे’ को अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको चौथो हप्ता उनले मेघा श्रेष्ठ, केविन ग्लान तामाङ र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । उनले पाँचौँ हप्ता प्रविण बेड्वालसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । पाँचौँ हप्ता नै उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुतिका क्रममा सज्जाले प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड अवार्ड नै जितेकी थिईन् । त्यस्तै छैटौँ हप्ता बिक्रम बरालसँगको युगल प्रस्तुतिका क्रममा पनि सज्जाले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेकी थिईन् ।
नेपाल आईडलमा रक स्टारको छवि बनाएकी सज्जा मोरङ निवासी हुन् । उनी २२ वर्षकी छिन् । अहिले काठमाठौँ नारायणटारमा बसोबास गर्दै आएकी सज्जाले ६ वर्षअघिदेखि संगीतको यात्रा थालेकी हुन् । सानैदेखि गीत गुनगुनाउने सज्जाले विद्यालयमा विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिँदै गायन कला तिखारेकी हुन् । संगीतमा कुनै औपचारिक शिक्षा नलिएकी सज्जाले प्लस टु अध्ययनका क्रममा विभिन्न स्थानमा स्टेज सिंगरको रुपमा पनि काम गरेकी थिईन् । आमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा साईप्रास गएपछि सज्जाले भाईको जिम्मेवारी समेत बहन गर्दै आएकी छिन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन समेत दिएर बसेकी सज्जा एसएलसी पश्चात नै ब्याण्डमा जोडिएकी थिईन् । ‘द लोडिङ ब्याण्ड’ मा आवद्ध उनलाई ब्याण्ड मेम्बरहरुले साँगितिक करियर निर्माणकालागि निकै सहयोग गरेका छन् । स्कुल, कलेज र स्टेज सिंगर हुँदै नेपाल आईडलको मञ्चमा पुगेकी सज्जाले निरन्तर संगीत क्षेत्रमा लाग्ने सोच बनाएकी छिन् ।
२) प्रविण बेड्वाल– प्रविण बेड्वाल नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् । प्रविणले नेपाल आईडलको स्टेजमा अहिलेसम्म ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र चौथो हप्ता मिग्मा लामासँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा पनि ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड नै जितेका थिए । त्यस्तै उनले चौथो हप्ताकै सोलो पर्फोमेन्सका क्रममा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड र केविन ग्लान तामाङ, सज्जा चौलागाई र मेघा श्रेष्ठसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका छन् । साथै पाँचौँ हप्ता उनले सज्जा चौलागाईसँगको प्रस्तुतिका क्रममा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड र पाँचौँ हप्ता नै उत्कृष्ट ८ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा सज्जा चौलागाईसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेका थिए । उनले गाला राउण्डको छैटौँ हप्ता उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जिेतका थिए ।बर्दिया निवासी प्रविण बेड्वाल नेपाल आईडल सिजन ३ मा ऐतिहासिक प्रस्तुति दिने प्रतियोगीहरुमध्येका एक हुन् । उनले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता नरेन्द्र प्यासीको आवाजमा रहेको ‘के भुल भयो प्रिया’ बोलको गीत गाएर ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका थिए ।
निर्णायक कालिप्रसाद बासकोटाले उनलाई उस्तादको संज्ञा समेत दिएका थिए । उनको प्रस्तुति नै सिजन ३ को गाला राउण्डमा पहिलो रेष्पेक्ट पर्फोमेन्स बन्न सफल भएको थियो । नेपाल आईडल सिजन ३ मा सुमधुर आवाजका कारण चिनिएका प्रविण २३ वर्षका छन् । बुटवल अडिसनबाट छनौट हुँदै उत्कृष्ट ११ को यात्रा तय गरेका प्रविणले सँगीत विषयमा नै स्नातक गरेका छन् । साँगितिक परिवारमा नहुर्के पनि उनी संगीतको क्षेत्रमा सानैदेखि सक्रिय छन् । रुसुरुमा आफु गायन क्षेत्रमा लाग्दा परिवारको त्यति साथ नपाएता पनि संगीतमा उनको रुचि झनझन बढ्दै गयो । अरुले त्यति साथ नदिएपनि उनलाई उनको हजुरआमाले हौसला दिएको उनी सम्झन्छन् । कक्षा १० सम्म गाउँमा नै अध्ययन गरेका प्रविणले त्यसपछि काठमाडौँको बसाई सुरु गरे । काठमाडौँ आएर त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका प्रविण पछि संगीत विषयमा नै अध्ययन गर्नका लागि भन्दै भारतको तमिलनाडुमा पुगे । त्यहाँबाट नै उनले संगीतमा स्नातक गरेका हुन् । स्नातक पश्चात ‘जात्रा’ नामक ब्याण्डमा आवद्ध भएका उनले संगीतको शिखरमा थप प्रगति गर्न थाले । सुरुमा रिझाउन नसकिएको परिवारले पनि नेपाल आईडलमा आएपछि उनलाई साथ दिन थालेका छन् । वास्तवमा प्रविणका बुवा आर्मीमा थिए । आफ्नो छोरालाई पनि आर्मी बनाउने सपना देखेका बुवाको ईच्छाविपरित प्रविणले संगीतको बाटो समातेका थिए । बुवा भनेको नमान्दै ‘संगीत कि घर’ भन्ने अप्सनमा उनले संगीतलाई रोजेका थिए ।त्यसैकारण प्रविण संगित क्षेत्रमा लागेको उनको परिवारलाई सुरुमा राम्रो लागेको थिएन । तर संगीत क्षेत्रमै लागेर प्रसिद्धि कमाएका कारण अहिले उनका बुवा पनि खुशी छन् । प्रविणले संगीत क्षेत्रमै लागिरहने अठोट गरेका छन् ।
३) केविन ग्लान तामाङ– केविन ग्लान तामाङ नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् । केविनले नेपाल आईडल सिजन ३ मा अहिलेसम्म ६ वटा अवार्ड जितेका छन् । नेपाल आईडलमा रकिङ प्रस्तुति दिँदै चर्चामा आएका केबिन ग्लान तामाङले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड जितेका थिए । उनले बिरगञ्ज अडिसनमा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड र गाला राउण्डको तेस्रो हप्तामा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड समेत जितेका थिए । गाला राउण्डको चौथो हप्ता उनले मेघा श्रेष्ठ, सज्जा चौलागाई र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेका थिए । उनले गाला राउण्डको पाँचौँ हप्ता उत्कृष्ट ८ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा किरण कुमार भुजेलसँग संयुक्त रुपमा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । त्यस्तै छैटौँ हप्तामा उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा उनले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड नै जितेका थिए । केविनले उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुति पश्चात खुलेको भोटिङमा सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका थिए ।
४) मेघा श्रेष्ठ– मेघा श्रेष्ठ नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येकी एक प्रतियोगी हुन् । मेघाले गोल्डेन माईकसँगै गाला राउण्डमा ६ वटा अवार्ड जितिसकेकी छिन् । मेघाले गाला राउण्डको पहिलो हप्ता बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको दोस्रो हप्ता मिग्मा लामासँगको जोडी प्रस्तुतिमा र तेस्रो हप्ता नेशन पुन मगरसँगको जोडी प्रस्तुतिका क्रममा उनले कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । तेस्रो हप्ता नै उनले रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड पनि जितेकी थिईन् । उनले चौथो हप्ता केविन ग्लान तामाङ, सज्जा चौलागाई र प्रविण बेड्वालसँगै संयुक्त रुपमा कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेकी थिईन् । त्यस्तै गाला राउण्डको छैटौँ हप्ता उत्कृष्ट ७ को सोलो प्रस्तुतिका क्रममा बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड पनि जितेकी थिईन् ।